भयावह बन्दै कोरोनाको प्रकोप, सरकार र नागरिकको बेवास्ताले यी जिल्लामा निषेधाज्ञा ! – Mission Khabar
भयावह बन्दै कोरोनाको प्रकोप, सरकार र नागरिकको बेवास्ताले यी जिल्लामा निषेधाज्ञा !
मिसन खबर १३ बैशाख २०७८, सोमबार ११:१५
संघीय राजधानी काठमाडौंउपत्यकासहित मुलकुभरका ९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढेसँगै सुर्खेतमा एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा गरिएको छ । बाँके र बर्दियामा सोमबार रातीबाट निषेधाज्ञाको घोषणा भैसकेको छ ।
महामारि समुदायस्तरमा ब्यापक रुपमा विस्तार भएको देखिदा समेत सरकार लकडाउन नगर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरिएपनि पालना भएको छैन । तर संक्रमण र मृत्युदर बढेसँगै प्रतिबन्धका दायराहरु भने बढाउन थालिएका छन् ।
विद्यालय तहका परिक्षा स्थगन
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को सङ्क्रमण बढेसँगै कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थान केन्द्र (सीसीएमसी) ले चलिरहेका सबै तहका परीक्षा रोक्न सिफारिस गरेको छ । परीक्षाका कारण कोरोना सङ्क्रमण झनै फैलिन सक्ने भन्दै सबै परीक्षा रोक्ने भन्दै गरिएको सिफारिस अनुमोदन भएको छ ।
हवाइ तथा स्थलमार्गको आवतजावतमा कडाई
नेपाली नागरिक बाहेक अरू देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय समेत सीसीएमसीले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको यो प्रस्ताव पारित भएपछि लागू हुनेछ । यस्तै, नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर विदेश जानेहरूलाई रोक्न निर्देशन दिइएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हवाइ मार्गबाट आउनेहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको छ ।